Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Suisse » Suisse dia nanambara ny fandrarana fidirana, ny quarantine retroactive ho an'ny mpandeha avy any UK sy Afrika Atsimo
Taorian'ny nahitana karazana virus coronavirus vaovao vaovao sy areti-mifindra ao UK sy Afrika Atsimo, dia nanapa-kevitra ny Filan-kevitra federaly fa handray fepetra hisorohana ny fihanaky ny fihanaky ny valanaretina vaovao. Ny olona rehetra niditra teto Suisse avy amin'ireo firenena roa ireo nanomboka ny 14 Desambra dia tokony hiditra am-patokantokana mandritra ny 10 andro. Ny Federal Council koa dia nanolotra fandrarana fidirana ankapobeny manomboka androany ho an'ireo teratany vahiny rehetra mitady hiditra any Suisse avy any UK sy Afrika Atsimo. Natao indrindra hampijanonana ny fitsangatsanganana avy amin'ireo firenena ireo ho an'ny tanjona fizahan-tany.
Nanaiky ny fanitsiana ho an'ny Covid-19 Ordinansa 3 mandrara ny dia an-habakabaka eo anelanelan'ny Suisse sy UK ary Afrika atsimo. Ny birao federaly an'ny sidina sivily FOCA omaly dia nandidy ny fampiatoana ny sidina eo anelanelan'i Soisa sy ireo firenena roa ireo manomboka amin'ny misasakalin'ny alahady 20 desambra.
Misy derogation vonjimaika amin'ny fandraràna ny sidina ho an'ny olona monina any UK na Afrika Atsimo izay mijanona any Suisse ankehitriny mba hahafahan'izy ireo mody. Izany koa no tranga ho an'ireo olona mipetraka any Suisse amin'izao fotoana izao any amin'ireo firenena roa ireo. Na izany aza, tsy maintsy atao ny mitarika areti-mifindra toy izany amin'ny aretina.
Nanapa-kevitra ihany koa ny Filan-kevitra federaly fa hanaisotra ny fahalalahana hivezivezy amin'ireo olona monina any UK hatramin'ny 31 Desambra. Ny olona avy any UK dia iharan'ny fandrarana ankapobeny tsy hiditra any Suisse. Ny fahalalahana amin'ny fivezivezena ho an'ny olom-pirenena britanika dia tokony tapitra amin'ny faran'ny taona.
Nomena fampandrenesana mialoha ny fepetra momba izany ny fanjakana UK sy Afrika Atsimo.
Ny famantarana voalohany dia ny fiovaovan'ny coronavirus vaovao dia azo zahana lavitra kokoa noho ny tsiranoka efa misy. Tsy mbola fantatra mazava hatreto hoe hatraiza ny fiparitahan'ny aretina vaovao any ivelan'i UK sy Afrika Atsimo. Tsy mbola nisy tranga niseho tamin'ny soritr'aretina vaovao teto Soisa.